Tsy fandriampahalemana RN 4, RN 6 : mampiaka-peo, mandrahona hitokona ny mpitatitra | NewsMada
Tsy fandriampahalemana RN 4, RN 6 : mampiaka-peo, mandrahona hitokona ny mpitatitra
Efa nirongatra, saingy vao mainka miha-mahery vaika ny tsy fandriampahalemana amin’ny lalampirenena, hatramin’ny nametrahana irony ”casseur de vitesse” irony. Mampiaka-peo, mandrahona hitokona noho izany, ireo mpitatitra, indrindra ireo mpampiasa ny RN 4 sy RN 6. Mitaky ny hanalana izany, ao anatin’ny 72 ora izy ireo.
Manoloana ny fanafihana taksiborosy, hatramin’ireo fiara ampanofaina mitondra mpizahatany, nampiaka-peo ny mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena fahefetra mampitohy an’Ambondromamy sy Antsiranana. Manambana ny hanao fitokonambe izy ireo amin’izany. Voalazan’izy ireo fa anisan’ny mahatonga ny asan-jiolahy ny fisian’ireo “casseurs de vitesse” amin’ireo lalam-pirenena ireo. Mihena ny hafainganam-pandeha, tsy maintsy mandeha mora ka hararaotin’ny jiolahy. Manome 72 ora ny tompon’andraikitra mahefa izy ireo hanalana ireo “casseurs de vitesse” rehetra amin’ireo lalana ireo.
Na ny eto an-dRenivohitra aza, isehoan’izany, toy ny eny amin’ny Rocade, mampitaraina ny olona maro. Vao nametrahana ihany koa ny eny By Pass, izay nitera-doza sahady omaly alina. Andrasana izay fepetra raisin’ny fitondrana manoloana ireo rehetra ireo.
Takisborosy roa voatafika, voakapa famaky ny mpamily roa
Nisehoana fanafihana taksiborosy tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra, teo amin’ny toerana antsoina hoe Andriba, kilaometra vitsivitsy miala an’i Maevatanana, omaly manodidina ny tamin’ny 12 ora alina. Nosakanan’ireo jiolahy tamin’ny vatan-kazo ny lalana-ka tsy afa nandeha ireo taksiborosy roa avy any Ambanja. Nivoaka avy anaty haizina ny jiolahy manodidina ny 10 teo ka nanatona avy hatrany ny mpamily. Nokapain’ireo tamin’ny famaky ny tanan’ireo mpamily roa lahy. Tsy nahetsika ny mpandeha rehetra nanoloana izany ka norobain’ireo olon-dratsy avokoa. Vola, finday sy entana samy hafa lasan’izy ireo tamin’izany. Nidify tanaty hny aizina ireo mpanafika taorian’izay.
Nisy ny fiara nandalo taorian’izay ka namonjy ireo naratra, sady nampandre ny zandary. Tonga teny an-toerana ny zandary avy any Maevatanana ary nanao ny fanadihadiana avy hatrany. Nisy ny fanarahan-dia ka voalaza fa efa nisy ny olona voasambotry ny zandary tamin’izany. Mandeha ny famotorana raha anisan’ireo mpanafika ireo tratran’ny zandary.